उनको जी स्पटमा धक्का - Nepali Sex Tube
उनको जी स्पटमा धक्का
मेरो उमेर त्यो बेला १३ बर्सको थियो । म पढ्नमा तेज नभयर हाम्रो बुबा आमाले म लाई पल्लो घरका सुनिता दिदिको घरमा पढ्न भनेर बेलुका बेलुका पठाउनु हुन्थ्यो। सुनिता दिदि १२ क्लासमा पढ्थिन्। म प्राय बेलुकानै सुनिता दिदिकोमा पढेर फर्कने गर्दथे घरमा। कहिले काहि धेरै नै होमवोर्क भएको बेलामा धेरै नै राति हुनाले म सुनिता दिदि सगै सुत्द्थे।
अनि बिहान उठेर घरमा जान्थे। हाम्रो घर सँगै भएको हुनाले अनि पहिला देखिनै सगै बसेको हुनाले हामी दुई परिवार मिलेर बसेका थियौं। जातमा हामी फरक भए पनि म सुनिता लाई दिदि भनेर बोलाउथे। उनि पनि उन्को भाइ जस्तै मलाई माया गरेर आफु सगै सुताउथिन।
समय बित्दै गयो सुनिता दिदि १२ को जाच दिएर फुर्सदमा बस्नु भएको थियो। त्य सैले आज्कल उहाले मलाई धेरै नै पढाउने अनि कुराकानि पनि गर्ने गर्नु हुन्थ्यो। उहा पनि जाँच सके पनि कुनै न कुनै किताब पढ्ने गर्नु हुन्थ्यो। पढाई चाडैनै सके पनि म सङै सुत भन्नु हुन्थ्यो त्य सैले म आज्कल सुनिता दिदि सगै धेरै सुत्न थालेको थिए।
आजकल का दिन हरुमा मैले सुनिता दिदिको हेराई अनि बोलिचलिमा धेरै परिबर्तन भयेको जस्तो लग्दथ्यो। राति सङै सुत्दा पनि धेरै तातो जस्तो लग्थ्यो। उनि आज्कल सानो पातलो किताब पढेर धेरै नै यता उता छटपटायको जस्तो लग्दथ्यो। पछि मात्र मलाई थाहा भयो त्यो बेला उनि योन उपन्यास पढथिन भनेर।
हाम्रो दिन हरु त्यस्तै बित्दै थियो। १-२ दिन बाट मलाई सपना मा कसैले मेरो लाडो खेलायको जस्तो लागि रहेको थियो। म प्राय भुसुक्कै निदाउने हुनाले राति केहि थहा पाउदिन थिय। तर पनि किन किन आज्कल मेरो सपना मा कसैले मेरो लाडो खेलायको जस्तो लागि रहन्थ्यो। अनि मजा अनुभब पनि हुन्थ्यो। ३-४ दिन यस्तै सपना देखेको जस्तो लाग्दा लग्दै १ दिन त म बिहन उठ्दा मेरो लाडो को छाला धेरै नै दुखि रहेको थियो। के भयेको होला भनेर म तुरौन्त बाथरुम मा गयेर कट्टु फुकालेर हेरेको त मेरो लाडोको छाला फर्कायको रहेछ । त्यो देखेर म दङग मये। होइन सपना देख्दा पनि लाडो को छाला कसरि फर्केको होला भन्दै त्योदिन पनि तेसै बित्यो।
मेरो लाडोको छाला पहिलो पटक फर्केको ले मएरो कपडामा पनि लाडिको टुप्पो छोयर सिरिङ सिरिङ हुदै थियो। म त्यो दिन राति अलि चदै सुते। सुनिता दिदि उनकै उपन्यास पध्दै थिईन। त्यो रात यक्कासि आधा रातमा मेरो लाडो अतिनै सिरिङ सिरिङ भयेको ले म ब्युझिय। मेरो लाडो कसैले खेलाई रहेको थियो म सपना नै हो कि भनेर सोचे होइन रहेछ। सुनिता दिदि ले नै यक् हात्ले मेरो लाडो समतेर तला माथि गर्दै अर्को हातले आफ्नो दुध माड्दै रहिछिन। मैले चाल नपायको जस्तो गरेर सुतिरहे। उन्ले करिब १ घन्टा जति मेरो लाडो चलाय पछि सुतिन। मलाई बल्ल त्यो दिन थाहा भयो कि मेरो लाडो सुनिता दिदिले खेलाउदि रैछिन भनेर।
अब त उन्को बानि नै भयेको थियो मेरो लाडो खेलायर सुत्ने। तर पनि म केहि थहा नपायको जस्तो गरि सुत्द्थे भने दिनमा पनि कुनै प्रतिकृया दिदैन थिय।
अब उन्को साहास अनि ईक्छा पनि बढ्न थलेको थियो। उनि अब मेरो लाडो राति राति चुस्न पनि थालेकि थिईन । मलैइ आसाद्दै मजा अनि काउकुति लाग्न थालेको थियो तर पनि म रातभरि नै थाह नपायको नाटक गरि सुतेर बस्थे। उनि आफुलाई चरम उत्तेजना मा ल्याउथिन अनि सुत्थिन। हेर्दा हेर्दै मेरो पनि लाडो ठन्केर यति ठुलो भयेको थियो। १दिन को कुरा हो म निदायको जस्तो गरि सुते उन्ले पनि चडैनै बत्ति निभ्यर सुतेको जतो गर्न थलिन। तर उनको ईक्छा पुरा नगरि कहा सुत्द्थिन र। मैले के के गर्दथिन भनेर हेर्न थाले । अध्यारोमा उनि पहिला आफ्नो सबै लुगा खोलेर म सङै टासिन आईन। अनि मेरो कट्टु पनि बिस्तारै खोलेर मेरो लाडो हल्लाई हल्लैइ ठुलो बनौन थालिन। अनि आफ्नो दुध पनि आफैले माड्न थालिन कहिने मेरो लाडो चुस्दै कहिले आफ्नो पुतिमा औला घुसायर चुस्न थालिन। त्यो रात उनि धेरै नै अबेसमा आईन मेरो लाडो चुसेर पनि उनिलाई सान्ति मिलेन छ कि के को कुन्नि त्यो दिन त दुई घोडा टेकेर उनि मा माथि चढिन अनि बिस्तारै उनको पुतिमा मेरो लाडो छिराउदै लगिन। पहिला त उनि केहि छिन म माथि चडि रखिन मत्रै पछि त मजाले उफृन नै थलिन। करिब आधा घन्टाको उफ्राई पछि उनि थकेर झरिन।मेरो भने लाडो ठाडो नै भै राखेको थियो। मलाई पनि फेरि चिक्ने ईक्छा हुदा हुदै पनि म बाध्या भयेर सुते किनकि म दिदिलाई त्यस्तो काम्
गर्न हुदैन जस्तो लागिरहेको थियो। अर्को दिन पनि उनि त्यस्तै आधा घन्टा जति मेरो माथि उफ्रेर सुतिन । मेरो भने लाडो ठाडो नै थियो। त्यो दिन मैले ज पर्ला पर्ला भनेर करिब २ घन्टा पछि दिदिको दुघ मा हात पुर्याय। आहा उनको त्यो तातो अनि सार्हो दुध समाउदा त म त सनक्क्कै भय। मैले बिस्तारै उनको दुध चुस्न थाले उनि पनि के कम थिईन र मेरो टाउको मा थिचेर आफु तिर धक्का दिन थालिन।
म उन्को दुध चुसेर आब चिक्ने सुरसार गर्दै थिय उनले मेरो मुख उन्को पुतितिर धसारिन मलाई पनि पुतिको स्वाद लिनु नै थियो मस्त चाटे उन्को पुति। करिब् १० मिनेट उन्को पुति चटे पछि म उन्को माथि चढे मैले लाडो सोझ्याउदै थिय उन्ले नै तानेर पुति तिर बढाईन । मैले पनि जोरको झट्का सहित उन्को पुतिमा लाडो हाले। आहा मेरो दोस्रो दिन् थियो लाडोले तातो तातो पुतिको दर्सन गर्न पाको। अब सुनिता दिदि पनि सन्केर आईन र भन्न
थालिन।।।। कान्छा माजाले चिक है बेसरि बल् गरि भित्र शम्म पसा है आहा। तैले हिजो अस्ति निदायको बेला म मेरो रम्रो शम्म ईक्छा नै पुरा भयेको थियन। आज बाट चाहि सधै यस्तै गर् है कान्छा। उनको शरिरमा अनौठो कम्पन भयो उनले बेग्लै फिलीङ्स गरिन अनि भन्दै थिईन जिवन भर नै यसरी नै मजा देउ म पनि ल्वाम ल्वम भित्र बाहिर बनाउदै थिए उनि चरमा आनन्दाम थिईन आखाँ बन्द गरेर या या या या या व व व व व आआआआआआ गर्दै थिईन मैले पनि आफ्ने सुरमा दिदै थिए म जति जति लाडोलाई भित्र बाहिर गर्थें उनी आनन्दले हलुका चित्कार मार्दै भनिरहेकी थिइन ।मेरो…ऽऽऽऽऽ…ऽऽऽऽऽऽअरुऽऽऽऽऽआहा…ऽऽऽऽऽऽऽसि…ऽऽऽऽऽऽसि…ऽऽऽऽऽअरु कस्सेर…ऽऽऽऽऽऽमच्चाउ…ऽऽऽऽऽदेउ न देउ…ऽऽऽऽऽऽम मर्छु…ऽऽऽऽऽऽऽऽसा…ऽऽऽऽऽऽऽ …ऽऽऽऽऽऽऽबीचऽऽऽऽऽऽआहाऽऽऽऽऽ…। “हुन्छ हुन्छ” भन्दै म उनका दूध माड्दै चिक्दै गर्न थाले ।
ख्वात……..ख्वात……..ख्वात…….ख्वात……ख्वात्ततततत…….ख्वाततत…….ख्वात…..मेरो धक्काको स्पीड बढ्न थाल्यो । मेरो लाडोले जतिजति उनको जी स्पटमा धक्का दिन्थ्यो उनी त्यतिनै मेरो ओठ गाला घाँटी चाट्न चुस्न थाल्थिन । जति जति धक्का मार्थें उत्तिउत्ति भित्रै पस्न मन लाग्थ्यो मजा आउने क्रम जारी थियो . म माथिबाट धमाधम धक्का दिन थालें । “कच्याकऽऽऽऽऽ कच्च…ऽऽऽऽऽकच्चऽऽऽऽऽक्वाँच…ऽऽऽऽऽक्वाँच””अंकल…ऽऽऽऽपोल्योऽऽऽऽऽऽप्लिज…ऽऽऽऽऽ ॥ऽऽऽऽऽमरे…मम्मि हौ” उसको मुखबाट चित्कार निस्किइरहेको थियो ।
बाबाआ…आअ…आआ…हहह…हहहह…सुइयआ…उउउफ…उउउउउउउउफ…उउउउउउफ…बाआअबाआअ उसलाई आफूतिर फर्काए, उसको खुट्टा लाई आफ्नो काँधमा राखे र बेस्सरी बजाउन थाले। “ऐया, ऐया, अझै बेस्सरी, आह आह”, सुनिता चिच्याउन थालिन। एत्तिकैमा उसको योनी मेरो लाडोमा टाईट हुदैं गयो, उनका हातहरुले मलाई अंगालो हालेका थिए, त्यहि अंगालोले मलाई तानेर मलाई सुनिताले किस गर्दै मलाई “आई लव यू” भन्न थालि। उसको आवाजपनि अलि बद्लेको जस्तो लाग्यो। सुनिताको निस्किन लागेछ भनेर मैले झन मेरो स्पिड बडाए। “आह आह आह आहहहहहहहहहहहहहहहहहहहह”, सुनिताको पहिलो अर्ग्याजम् होला, मैले पनि झन् स्पिड बडाएर र ड्याम कि ड्याम बजाउन थाले ऐयाऽऽऽ ऐयाऽऽऽ आमाऽऽऽ आमाऽऽऽबुवा हौऽऽऽ मरें सरऽऽऽ विस्तारैऽऽऽ मरेंऽऽऽऽ ऐयाऽऽऽऽ ऐयाऽऽऽऽ“ केटीको मुखबाट आवाज निस्किदैं थियो ।
ई पनि निकै मजा आए जस्तो थियो , वहाँ “आहहहहहहह ऽऽऽऽऽऽऽ ओहहहहहहहहऽऽऽऽऽऽ उफफफफफफऽऽऽऽऽऽऽ” गर्दै
पनि मलाई च्याप्प समाउँदै तल बाट धकेल्न थाली । मेरो चिकाईको स्पीड बढ्दै गयो , जति स्पीडले चिक्थे , उनी पनि कराउन थाल्थी “आहहहहहहहहहहह…………. ओहहहहहहहहहहहहह………… सीऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ …………… उहहहहहहहहहहहहहहहहहह………………. अझै……….. अझै……….. कस्सेर ………….. कस्सेर…………..”
यस्ररि त्यो दिन् करिब ४ पटक जति चिके होल मैले। तर मेरो फुसि झर्न मानेको थियन। मेरो चिकाई को परि पक्क्वता देखेर दिदिले सोधिन्। होइन कन्छा त त खप्पिस भको रहेछ नि त? कता सिकेको हो नि त्यस्तो आईटम हरु? मैले भने दिदिकै उप्न्यासले सिकयेको हो नि।।।।। दिदि लाज मान्दै मेरो गालामा मोई कादै भनिन धत् दिदिको किताब पनि पध्नु हुन्छ त?